Duqa Degmadda Gaalkacyo oo ka hadlay Arrimo badan ,Hambalyana u diray Madaxweyne deni (dhegayso) – Radio Daljir
Duqa Degmadda Gaalkacyo oo ka hadlay Arrimo badan ,Hambalyana u diray Madaxweyne deni (dhegayso)
Janaayo 9, 2019 7:58 b 0
Duqa Degmada Gaalkacyo Nabdoon Yaasiin Cabdisamad waxaa xilka loo soo magcaabay 18 Bishii 11 waxaan si rasmi ah uu xilkaasi ula wareegay isla 22 bisha 11 2018 Muda laba bilood ah ayuu Xafiiska Joogaa .
Ugu Horeeyn waxa uu Hambalyo u diray Madaxda Cusub ee Dowlada Puntland uu ugu baaqay in ay ka dhabeeyaan Balnqaadkii ay u sameeyeen shacabweynaha Puntland .
Gudoomiyaha Degmada Gaalkacyo Nabadoon Yaasin Cabdisamay ayaa waxa uu sheegay inta uu joogay Xafiiska in aysan jirin wax qabada ah uu kala kulmay Bulshada Rer Gaalkacyo waxa uuna ku amaanay in ay yihiin Bulsho diyaar u ah Hormarinta Magaalada Gaalkacyo Hadii ay Heelaan Hogaan Wanaagsan .
dhanka kale Duqa Degmada Gaalkacyo ayaa waxa uu si kooban uga hadlay waxqabadkiisa ku aadna muda kooban uu xilkaasi hayo
Sidoo kale Duqa Degmada ayaa waxa uu sheegay in ay maanta Bilabayaan Tiro koon laga sameenayo Xafaado kamid ah Magaalada Gaalkacyo gaar ahaa israac .
Madaxweynaha Cusub ee Puntland oo kulan la qaatay laamaha Amniga
Axmed Madoobe oo ku dhawaaqay Dagaal Cusub oo Alshabaab kadhan ah (Daawo)